Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Xogta Afgambigii Turkiga oo bannaanka timi
Aug 10, 2016 ANALYSIS, ENTERTAINMENT 0
Hase ahaate, 2 maalin kahor xilligii la fullin lahaa Inqilaabka Milateri ayaa waxaa dalka Turkiga gaartay Christiana Amanpour, oo ah Saxfiyad asal ahaan Iraaniyad ah balse heysata dhalashada Ingiriiska, sidookalena ah madaxa wariyaasha dibadda ee TV-ga CNN oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
Haweeneydan 58 jirka ah ayaa Qalab warbaahineed oo casri ah geysatay Turkiga, waxayna 2 xarun oo aad u qalabeysan ka sameysatay caasimadda Ankara iyo magaalada Istanbul, walow markii horreba uu TV-ga saldhig ku lahaa halkaas.
Waaxda difaaca Mareykanka ee “Pentagon”-ka ayaa xiriir aad u wanaagsan la leh Telefishinka CNN, waxayna xaruntan warbaahineed awood u leedahay inay ogaato sirta hoose ee dowladda, gaar ahaan abaabulka Af-gambiyada dibadda.
Dalalka Russia, Iran, Syria….waxaa sida la fahamsan yahay ay ogaayeen abaabulka Inqilaabka Milateriga, oo la leeyahay waxaa hogaaminayay “Mareykanka”.Iyadoo laga duulayo arrintan ayuu madaxweyne Vladimir Vladimirovich Putin waxaa uu La-teliye sare oo dhanka ammaanka ah si qarsoodi ah ugu soo diray Turkiga.
Bil kadib markii uu Ruuska dhambaalkiisa soo gaarsiiyay Ankara, waxaa billowday Af-gambiga oo markii hore qorsheysnaa in la fuliyo August, laakiin waa la soo hormiyay oo waxaa laga dhiggay July,kadib markii ay Milateriga ka baqeen in la fahmo sirtooda oo qeyb ahaanba fakatay.
Dowladda Turkiga oo daba socota Mukhaabaraadkii ay ka heshay Ruushka oo ay ku dhowaad sanad cadow ahaayeen ayaa billowday inay maxkamadda sare weydiisato dalab lagu soo xerayo qiyaastii 2 kun oo ka tirsan ciidamada cirka, badda iyo xaakinno lagu tuhmayay inay hoggaaminayeen isku-dayga Af-gambi.
Xiriirka Turkiga iyo Ruushka ayaa dhacdadaasi kadib xumaaday, warar kul-kulul ayayna labada madaxweyne hawada issu-mariyeen iyadoo waliba la’issu hanjbay.
Ruushka oo Sirdoon ahaan aad u horumarsan ayaa durba sawirtay in fikirka looga soo riday diyaaradda dagaal uu soo abaabulay Mareykanka balse uusan waxba ka ogeyn madaxweyne Erdugan. Sida uu gadaalba ka ogaaday madaxweynaha Turkiga laftiisa.
Warbixintan waxay leedahay, Mareykanku waxaa uu isticmaalayay farsamo uu ka dhaxlay British-ha oo ah ” KALA QEYBI KADIBNA KA GUULLEYSO”
24 saac kadib markii uu fashilmayay Inqilaabkii Turkiga, oo sida la sheegeyna waaxda difaaca iyo laanta sirdoonka Mareykanka ay TV-yada hor-fadhiyeen, si ay ula socdaan hadaba halka ay howsha mareyso iyo sida loo bur-burinayo dowladda doorashada ku timid ayaa waxaa durba is-baddelay go’aankii Washington oo soo baraarugtay,kadibna si aan la jecelysan uga hadashay dhacadan.
Garoonka diyaaradaha Incirlik oo sal-dhig u ah ciidamada NATO oo uu hoggaaminaayo Maryenkanka ayaa xilligii uu af-gabiga socday waxaa halkaasi kasoo duulayay diyaaradaha dagaalka Milateriga oo duqeynayay Ankara iyo Istanbul,kuwaasoo xitaa isku-dayay inay HAWADA ku khaarijiyeen madaxweyne Erdogan.
Iyadoo Mareykanka uusan Turkiga uga digin dhaq-dhaqaaqa Inqilaab ayuu haddana ku sii darsaday in garoonkii uu maamulayay ay kasoo duulaan diyaarado uu ogyahay inay bur-burinayeen dowllad uu hogaamiyo madaxweyne aad ugu dhow oo waliba saaxiibadiis kalena uga soo go’ay. Mohamed Osman Habiib ayaa soo tarjumay warbixintan.
Xaqiiqada aysan kuu sheegin Warbaahinta ayaa ah” in 7 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Ruushka oo caawinaad ka helayay qalabka difaaca ee S400 ay diyaaridihii Af-gambiga ugu hanjabeen inay soo ridi doonaan haddii uu soo qabto RAADEERKOODA, taasoo caawisay dowladda Erdogan maadama aysan Milaterigu awoodin inay sameeyaan dhaq-dhaaq xor ah.
Ihaannada ilaa iyo hadda uu hilaami la’yahay Mareykanka ayaa ah in xilligii uu socday Af-gamiba ay ciidamada daacadda u ah Erdogan korantada ka jareen garoonka diyaaradaha Incirlik, waliba tiro ciidamo ah ayaa la dul-dhiggay oo waliba hal hal ayaa loo xer-xeray saraakiishii la shaqeyneysay NATO saaxiibadana la aheyd Mareykanka.
Gabo-gabadii, Erdogan ayaan qarinin sida uu u tuhunsan yahay Mareykanka iyo reer galbeedka oo dhan, waxuuna marar badan yiri ” waddamo aan saaxiibo dhow moodnay ayaa na khiyaamay, waase la kala baxayaa”.
Erdogan ayaa hadda booqasho ku jooga Ruuska lana kulmay dhigiisa Putin, taasoo dhabar-jab ku ah siyaasadda Mareykanka, waxayna muujineysa in Turkigu uu markan si niyad wanaag ah ula xeran doono Ruushka oo ah awoodda keliya ee hor-joogsan karta taliska Washington.
Shacabka Tirkiga ayaa taariikh lama iloobaan ah ka dhiggay dunida, waxaana lagu xasuusan doonaa inay issu dhiggeen Taangiyo,taasoo ah geesinimo xad-dhaaf ah waxaa ayna dalal badan bareen waxa ay tahay dimuquraadiyadda.
Haddaba, haddii aad qiimeyso, yaa dhanka Sirdoonka ku horeeya Marekanka iyo Ruushka?
awood, Christiana Amanpour, madaxweyne, Xogta Afgambigii Turkiga
Wadanka Finland oo noqonaya dunida dalkii u horeeyay ee mamnuuca Sigaarka Labadii qowmiyadood ee ugu badanaa Itoobiya oo gadooday iyo xaalada oo sii xumaanaysa
Akhriso Yaabkan: Saami-qaybsiga Beelaha Somaliland Vs Dowlada Federaalka...
Shaqada Culimada Iyo Hiilka Ay Bulshada Ka Mudan Yihiin